CAQABADAHA KALADUWAN EE KU QABSADA ARDEYDA SOOMAALIYEED WADANKAN PAKISTAN | Laashin iyo Hal-abuur
CAQABADAHA KALADUWAN EE KU QABSADA ARDEYDA SOOMAALIYEED WADANKAN PAKISTAN
Allaah ayaa mahad oo idil iska leh, Nabadgalyo iyo Naxariisina Nabigeena Muxammad ah Allaha siiyo.
Intaa kabacdi. Waa wax qofkastoo caqli lahi fahmi karo in mar hadiiba aad ka tagto Wadankaaga aad la kulmeeyso, Caqabaad kala duwan oo laga yaabo in aadan kula kulanteen Wadankaadii Hooyo. Laakiin xaqiiqdu waxey tahay, inkastoo qofkastaahi jeclaan lahaa in uusan waalidkii, walaalihii iyo qaraabadiisa uusan ka dheeraan, hadana danta ayaa nawada qasbeeysa �Ileyn Dani Waa Seetee�, danahaasi ha ahaadeen kuwo Waxbarasho, kuwo Nolol-doon ama kuwo Ganacsi intaba, dabcan waana wax lagu qasbanyahay in lagu sabro si ula jeedadii looyimi loogaaro. Caqabadahaa oo aad u badnaankara bal inta ugu muhiimsan ee Ardeyda Soomaaliyeed Ku qabsata wadankan Pakistaan aan isla eegno. Waana kuwan soo socda.
Cimilada Wadankan Pakistan
Hanfi iyo Kuleyl iyo
Baraf ma leh dhulkeenuye
Xaqiiqdii wadankeennii Soomaaliya wanaaga ilaah ku manneystey waxaad si dhab ah u dareemi kartaa marka aad banaanka uga baxdo ee wixii aad u baratey wax ka duwan aragto. Ileyn waatii la yiri �Qorixi markii eey dhacdo ayaa la ogaadaa wixii eey heysey�
Wadankan Pakistan cimiladiisa marka loo eego kan Soomaaliya aad ayuu uga duwanyahay guud ahaan, laakiin Soomaaliya lafsad ahaanteeda ayaanba isku cimillo aheyn, oo gobolada qaar ayaa kuleyl dartii magaalooyinka looga Xagaa-Baxaa, waqtiyada Qaboobuhuna dhaxantu aad u daran tahay gaar ahaan: Gobollada Waqooyi-Bari iyo Waqooyi, xattaa Gobolada Dhexe qaarkood ayaan cimiladoodu sahlaneyn. Guud ahaanse Soomaaliya waxaa la dhihi karaa waa wadan cimilo wanaagsan, inkastoo Baaruuda hubka oo dhowr iyo tobanka sano hawada laga buuxinayey iyo Suntii Nuclear-ka ee Xeebaheena sida Arxan darada ah loogu shubey, eey maalinba maalinta ka dambeysa cimiladii sii xumeynayaan, ayadoo cudurro aan horey loo aragna soo ifbaxayaa.
Wadankan Pakistan sidoo kale magaalooyinkiisa isku cimillo maaha Xaqiiqdii, tusaale ahaan Karachi oo ardeydu ka qeylineyso Kuleyl iyo Qabowba, ayaa hadana ah meesha ugu roon, iyada laf ahaanteedana waqtiyada qaboowga ah Heater ama Buste la�aan qofkii seexda wuxuu halis u yahay in dhaxani gasho. Waqtiyada Kuleylkana hadii Daqiiqad Korontadu tagto dadku weey isla wada da�ayaan Dhidid dartii, mararka qaarna ayadoo korontadu joogto ayaa hawaduba ku dhibeysaa Nohda ama Hanfiga dartii. Bal ka waran magaalooyinka qaar oo laamiyadu dhalaalayaan waqtiyada kuleylka! noloshuna cariiri galeyso qofkii aan gadan Karin Air-condition (Mukeyf) waloow uu jiro mid Soomaalida u bixisey Abuu-Jawaanle oo raqiis ah. Waqtiyada qaboowgana Heater la�aan noloshu xaqiiqdii wey adagtahay hadii qofku uusan gadan Karinse waa Dan, waxaase hore loo yiri �Taako lama guuree Tabarbaa laguuraa�
Meelaha qaar ayaa ardey lagu soo qorey waxeey dantu ku qasabtey in eey sanadkoo dhan magaalooyinkale daganaadaan oo duruusta ku diyaariyaan, imtixaanaadka oo kaliyana u yimaadaan, kuleyl xadkabax ah dartiis, dumarkuba ha usii darnaadeene.
Luqada Urdu-ga ayaa iyana ah caqabadaha ugu waaweyn ee Ardeyda Soomaaliyeed kala Kulmaan Wadankan Pakistan guud ahaan, gaar ahaana dhinaca Waxbarashada haba ugu badnaadeen kuwa dhigta jaamacadaha dowlada (Public Universities). Sida la wada Ogsoonyahay luqadu waa furaha aad ku dhexgali laheyd, ku fahmi laheyd, waxna kula qabsanlaheyd, ummada aad wadankooda timid, hadii aadan waqtiga ugu horeeya ee wadankaa aad timid aadan barashadeeda horey ka bilaabina waxeey kugu noqoneysaa caqabad weyn oo ku heysatada inbadan oo wadankaa aad joogto, taasoo waxqabsi farabadana kaa hor istaagta. Soomaalida oo caan ku ah in eey meelo gaar ah wada dagaan meeelkastoo Aduunka la tago, ayeey adagtahay in Urdu-ga aad si sahlan ku barato, madaama inta badan aad Af-Soomali ku hadleyso, wixii kasoo harana Englsh, baahi sidaa u weyn oo dhinaca Urdu-ga ah dareemi meysid inta badan, gaar ahaan marka ardeyga Banaanka Soomaalida la daganyahay oo uusan Hostel daganeyn. laakiin Dhibka ugu weyn wuxuu heystaa ardeygii sidaa jaamacad Dowladu leedahay ku taga asigoon Urdu-ga fahmeynin, maxaa yeeley ardeyda oo Pakistan u badan, Urdu-gana wada fahmaya ileyn waa Luqadoodiiye iyo ardeygii Soomaaliyeed oo kaligii fasalka ku ah ama fasalka tira aad u yarba ka noqnayaan, ayadoo macalimiinta qaarkoodna eeysan sidii eey rabaan wax English ugu sharxi Karin, hade soow dhagax meel la dhigey oo kale xiisada dhexfadhi maaha! Aydeyda Soomaaliyeed ee ka qalinjabiya jaamacadaha wadankan xitaa Urdu-ga ayaa ka mid ah waxyaabaha eeysan shaqada uga dhex helin wadankan, maxaa yeeley macaamiisha shirkada(Customers) waa Pakistaan, English-kana ummadu ma wada taqaan, hadii aadan Urdu-ga ku fiicneyna hade waxaad tahay qof meel weyn la�. Waxaa muhiim ah in aan tilmaamo in wadankan Shaqadu aad ciriiri u tahay Shacabkoo aad u badan dartii (152Million Peaple) oo �maxaad taqaan�(Qualifications) inta wax ku heshaa eey aad uga yar yihiin inta ku hesha �Yaad/Kumaad taqaan�(Contacts).Marka Ajnabi jaaniskii wuu yaryahay, Nasiibkuse wuu jiraa.
Qofka marka uu wadan cusub tago hadii uu kaligii ku yahay wadankaa oo cidna eeysan u joogin waa in uu hotel degaa inta uu deegaan rasmi ah ka helayo, hadiise uu yahay ardey jaamacad Hostel leh u yimid, Hostel ayaa u diyaar ah ama si marti ahaan ah ayuu ardey kale oo eey is garanayaan ulasiidagayaa. Laakiin ardeygii aan hostel rabin wuxuu ku qasbanaanayaa in uu guri banaanka ka kireysto, maxaa yeeley nolosha Hostelka wey ka adagtahay nolosha Banaanka, sabantoo ah sida ka jirta Jaamacadaha qaar, martida kuu timaada waa in aad diiwaan galisaa, mudo go�an ayuuna kulajoogi karaa qofka martida kuu ah, waqti go�an ayaa lagu soo xaroodaa Hostelka, hadii aad soo daahdo habeen waxaa lagaa qorayaa: magacaada, Hostel number-kaada, room number-kaada, hadii habeenkaa wax dhacaana dadka ugu horeeya ee loosootaagayo ayaad ku jirtaa. Jaamacadaha qaar isla marka aad dhameyso waxaa lagu siinayaa maalmo go�an in aad uga guurto, �Guri kale hel ama ha heline�. Dhinaca Cuntada Hostelka miis cuntada ardeyda loogu kariyo ayaa jira, laakiin dadkan oo Bisbaas cunida ku waalan, kaaga sii darane bisbaaska waxa si xad dhaaf ah loogu kariyaa Suugada ee sida Soomaalidaba sameyso hadii weel gaar ah lagu cunayo waxba ma dhibteen, wax lalama cuni karo Pakistaanta bisbaaskaa Awgii. Hadiise ardeydu badan yihiin waa macquul in eey miis gaar ah sameystaan Sida: Miiska Cuntada ee Soomaalida.
Dhinaca kale ardeygii u yimaada jaamacad aan hostelba laheyn, wuxuu isna ku qasbanaanayaa in uu guri banaanka ka kireysto.
Hadaba; Guryaha sida looga kireysto wadankan Pakistan aad ayey uga duwan tahay qaabkii Soomaaliya looga kireysan jirey. Wadankan marka aad guri kireysaneyso waxaad ubaahantahay waraaqaha ogolaanshaha degitaanka (Residential Permit), waxaa lagala xiriiraa niman howshoodu tahay in eey ummada u kala kireeyaan una kala gadaaan guryaha (State Agents). Milkiila kastaa ee guri leh wuxuu xiriir la leeyahay nimankan guryaha kireeya, si gurigiisa uu kiro ugu helo, dhinaca kale nimanka guryaha kireeyana iyana waaba Ganacsigoosa oo dhaqaale ayey ka helaan markastoo guri eey kireeyaan, ayagoo waraaqahaana u kala sixiixaya labada kooxood. Dhibaatooyinka ka jira ayaa waxeey tahay in guryaha qaar aan Ajaanibtaba laga kireyneyn, oo marba hadii lagu arko in aad Ajnabi tahay lagu leeyhay �Sorry!� hadiise laguu ogolaado waxaa kusii horyaala caqabad kale oo ah: ma Qoys (family) ayaad tihiin mise �Rag� Doobab ama Iskaabulo? Mar hadii aadan aheyn dumar iyo rag iswata wey adagtahay sida lagaaga kireeyo guryaha qaar. Waa cajiibe! Soomaaliya ayaa waxaan ku arki jirey dadka guryaha leh oo hadal ka bilaaba �Walaal ma ilmo ayaad wadataan?� oo hadii jawaabtaadu noqoo �Haa� eey adagtahay sida guryaha qaar aad ku hesho, ayagoo ka cabsanaya in Ilmaha guriga darbiyadiisa ka jajabiyaan, Khad ama Hanqaas ka buuxiyaan I.W.M. Qoysaska Doorooyinka (Digaaga) qabana hade kumaba siijiraan. Milkiilayaashaasi Soomaaliyeed waxeey aad usoo dhaweeyaan Qoysaska aan Ilmaha wadan iyo raga aanan Xaasaska laheyn. Xaalka wadankan Pakistan-se waa Caksi (The Opposite), maxaa yeeley hadii Soomaaliya guryaha loo baqayey �Halkan waxkalaa loo baqayaa� maxaa yeeley guryaha wadankan Pakistan waxeey u badanyihiin fooqaq dhaadheer (Flats) oo leyn leyn ah, hade Soolane aan ilaah ka cabsaneyn iyo Dumar iska Indha dhaadheer halisteeda ayey leeyihiin, sidaa daraadeed waxaa horeyba loo yiri �Biyo inta eeysan kusoo gaarin ayaa leyska moosaa�, hade xaalku soow noqon maayo gurigaada marka horaba iskaabulo haka kireyn. Mararka qaarna milkiilaha guriga oo kuu ogol ayaa waxaa kuudiidi kara niman Amniga iyo Nadaafada u qaabisan qeybtii Fooqaq ahba, nimankan oo lagu magacaabo Union kuwaasoo bilkastaa lacag dhan: $3-$4(Rs: 200/ to Rs250) ka qaada gurikasta. Waloow cadaalad darana eey ka jirto meesha, maxaa yeeley dumarka iskaabulada ah waa loo ogolyahay (ma Faa�iidaa!) halka raga iskaabulada ah looga diidayo (Kuwanse ma qasaaraa!)�
Maadaama guri hal ardey kaligiis uusan kireysan Karin �sida caadiga ah� wixii Ijaar (Kiro) iyo Bills ah sida: Korontada, Gaaska, Biyaha, � uusan la kali noqon Karin, ardeydu weey is baheystaan, hadba sida eey isu fahmayaan. Hadii la ogolaado in la idinka kireeyo guriga, howsha intaa kuma dhamaane waa in aad lacag farabadan oo Hormaris ah (Advance Payments) bixisaan, taasoo lagaa siiheysanayo inta aad guriga ku jirto. Waxaad sidoo kale isku dareysaa lacagta bisha ugu horeysa ee ijaarka iyo Bil lacagteed oo aad siineyso nimankii guryaha kireynayey (State Agents), waa sadex qarash oo is dhinac ordaya hal marna lagaa rabo in aad wada bixiso. Kadib ayaad u tageysaa guri qalli ah, waa markaa Boorka ka jaf oo dhaq kadibna nalalka iyo fanankaba(Marwaxadaha) adiga ku dhagso, maxaayeeley cidkastaa oo ka guureysa guri Alaabtii eey markii hore ku dhagsatey weysii fujisaneysaa.
Dhinaca kale, marka aad ka guureyso guriga waa in aad ugu yaraan �Hal Bil ka hor� garsiisaa digniin milkiilaha guriga, si lacagtii uu kaa heystey uu kuugu diyaariyo, Nasiib darrose! waxaa badanaa dhacda in aadan lacagtii sideeda u heleyn oo qasab eey noqoneyso in wax uun lagaala haro, mararka qaar waa wax xoog u eg, mararka qaarna waa sababo aan ku qancineyn. Inkastoo eey jiraan dad wanaagsan, Allaahna kacabsanaya oo waxkastaa wanaag ku dhameeya hadana Nasiib darro marka Lacagba howshu mareyso dadkaas aad ayey u yaraanayaan.
Mar hadaad Soomaaliya kasoo tagto Pakistaana timaado, Canjeero (Laxoox) iyo Cambuulo (Digir la kariyey) ama mida duban waa Falfaliir-kee ma heleysid, Hilib aad Gacanta iyo Gowska kula dagaalanto iyo guud ahaan cuntadii aad garaneysey ee aad kusoo kortey jecleydna warkeedaba daa. Waxaa kasii daran waxaa si joogta ah looga cunaa hilibka Dooro (Digaag) �Gacan ku Rimis� ah, waana waxa u sabab in dadka intooda badan Ilko beelaan halkan, waa macquul in dad ayagoo ilka qaba kaasoo tagey, kuu yimaadaan iyagoo Af-Dulaaqsan!. Waxaase waxkasta kasii daran sheykasta ee aad damacdo in aad meel ka iibsato ee aad cunto waxaa ka buuxa Bisbaas wadankanna looga yaqaan (Masalla ama Marjii). Ardeydu isku mid maahee, qaar ayaa qoys ah oo Gabdho Soomaaliyeed wax u kariyaan kuwaas waa Nasiibsadeen, laakiin Ardeyda kalee Iskaabulada (Salbateer) ah ayaa xaajadu kusoo hareysaa, waloow ayaga lafsad ahaantooda loo kala qaadi kari laba qeybood:
A-Qeyb qof wax u kariya kireystey oo bishiiba Qarash iska bixisa. Ardeydaas ha ahaadeen kuwo cuntada karsan kari lahaa laakiin iska daayey maadaama eey tahay wax aad u dhib badan in aad cunto Karin gasho adigoo Jaamacad ka yimi, waloow halkan aan Dhuxul la afuufeyn sidii Soomaaliya oo kale oo Gas wax lagu karsado. Kuwo kale ayaa jira oo cunto Karin meel laga maraba aan garaneyn �Waa dhib badanaa wadankan iyo guud ahaan Qurbaha ku qabsada dhalintee, gaar ahaan wiilkii Hooyadii dhowr gabdhood u dhashay, haduu MADI yahayna gabdhana la dhasheen warkiisaba daa�
B-Qeyb iyaga Cuntadooda karsada ha yaqaaneen sida wax loo karsado ama waxooda ha iska walaaqdeene, kuwaasoo mararka qaar ka caajisa jikada. Cunto maqaayad loo aado wadankanna waxaa ugu caansan uguna macaan Bariis si cajiib ah loo kariyo oo lagu magacaabo (Biryaanii), laakiin Bisbaas ayey raaxada uga qaadaan taasoo Ilmo, Dhidid, Hingo iyo Madax Cuncun aad ku waalaneyso, gaar ahaan haduu Jaalle (Huruud) yahay, qofkii xaalka fahmaya wuxuu ka dalbadaa midka Cad si basbaaska uu uga badbaado, xoogaase lagu darey kan Jaalaha ah, maxaa yeeley isagaa Suugadii oo dhan la socotaa. Wax kale iska daaye Nac-nac iyo Jallaato Bisbaas ka buuxo yaa arkey waayaabe!. Gabyaagii wuxuu yiri �Nin Aduunya Joogoow Maxaa Aragti kuulaaban, Aakhira nin aadoow maxaa lagu ogeeysiiyey�
Biyaha caadiga ah ee ka qulqulaya tubooyinka wadankan maaha kuwo la cabi karo caafimaad ahaan, maxaa yeeley tubooyinka biyaha soo qaada waxey soo dhexmaraaan Bullaacado (meelaha eey ku ururaan wasaqda Musqulaha). Waxaa jira Tubooyin Daxaleystey, dulduleeshadeyna oo meelo laga kabkabey, laakiin �Wixii� eey isku darsoomayaan, gaar ahaan magaalooyinka Qadiimiga ah. Wey jiraan dad iska caba waana waxa aad inta badan u maqleyso tiro aad u badan oo Bukaan ah, lana leeyahay Kilyaha ayaa istaagey ama shaqadiiba joojiyey sidaa daraadeedna u dhinta.
Dhinacakale dadka wadankan in badan joogey waxeey soo iibsadaan Digsiyo waaweyn oo eey biyaha ku karsadaan, waa sida aad ku heli karto biyo Saafi ah oo caafimaad ahaana leysku halleyn karo, intii aad rabto karsee firinjeerka ama Talaajada iska gasho weeye, dabcan qarashka aad ayuu u badanayaa hadii la yiraahdo biyaha Miyosaxada ama �Meneral Water-ka� ayaan cabeynaa inta wadankan aan joogno. Dadka qaar ayaa iska soo gata biyo laga tayo wanaagsan yahay oo Caagag Toban Liitar qaadyo ah ku jira, kuwaasoo la siisto $0.25 (Rs: 15/) laakiin waxaa la cadeeyey in eeysan aheyn biyo leysku halleyn karo maxaa yeeley tubooyinkaa ayeey Filters uun ku xiraan sidaana lacag ku raadiyaan.
Soomaaliyaba meelaha qaar ee aan biya galintu gaarin, waxaa dadka biyaha u keena Gaari-Dameer, kuwaasoo Fuustooyin ama Caagag waaweyn biyaha kuugu shuba. Waxaa nasiib darro ah marka uu ku gadinayo biyaha fuustadii ama caagii weeynaa labada Wadaan-Caageed mid ka uusido maahane kan kale dhulka ayuu sii dhigayaa caradii iyo qoyaankii salka uu ku watey ayuuna kuugu hoorinayaa weelka, taasoo halisteeda leh. Hadiise nasiibkaada ilaah ka dhigey inta biya galinta sanadihii dambe ganacsatada Soomaaliyeed eey wadeen soo gaartey waa badbaado weyn, maxaa yeeley malaha tubooyin meela dhaadheer ka imaanaya oo bulaacadana soo dhexmaraya, meelo aan dheereeyn ayeyna ka imaanayaan maxaa yeeley ganacsade kastaa aag ayaa u xiran (waa ganacsiga qaabta daran ee dagaalada laga dhaxlaye).Waase laga baxayaa Insha Allaah.
W/D: Cabdulqaadir Maxamed Cismaan (Cabdi Boqor)